အပြာစာပေစွဲခြင်း - အာရုံကြောသိပ္ပံအမြင် (၂၀၁၁) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှု
COMMENTS: (စာမျက်နှာအောက်ခြေမှာဆွေးနွေးငြင်းခုံလင့်များကြည့်ရှုပါ။ ) ဤနေရာတွင်အဓိကအငြင်းပွားမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ အပြုအမူအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဓာတုဖြစ်စေဖြစ်စေ၊ စွဲလမ်းမှုအားလုံးသည်အလားတူဖြစ်စဉ်များနှင့် neurocircuitry တို့ဖြစ်သည်။ အာရုံကြောခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး တို့ကဤအယ်ဒီတာ့အာဘော်သည် hypofrontality ကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏ခြေလက်စနစ်မှရရှိသော Impulses သတင်းအချက်အလက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဤအခြေအနေ (hypofrontality) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါး၊ အစားအစာနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုများတွင်တွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် DeltaFosB သည်အမူအကျင့်နှင့်ဓာတုစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံးအတွက်လိုအပ်သောဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနများအရ DeltaFosB သည်လိင်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူမြင့်တက်လာပြီးမြင့်မားသောအဆင့်များသည် hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်နေသည်.
Donald L. ဟီလ်တန်, Clark က Watts
Neurosurgery, San Antonio တွင်, San Antonio တွင်, TX, အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံစင်တာတက္ကသိုလ်မှဦးစီးဌာန
Neurosurgery, ဥပဒေတက္ကဆက်ကျောင်းတက္ကသိုလ်ဌာန, Austin, TX, အမေရိကန်နိုင်ငံ
Clark က Watts
© 2011 ဟီလ်တန် DL ဒါကမူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်ပေး, open-access ကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုရသောကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေဆောင်းပါး, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွားဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုဤဆောင်းပါးတွင်ကိုးကားရန်: ဟီလ်တန် DL, Watts C. ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲမြား: A မှ neuroscience ရှုထောင့်။ တစ်ဟုန်ထိုး Neurol Int 21-ဖေဖော်ဝါရီ-2011; 2: 19
ဘယ်လိုဒီ URL ကိုကိုးကားရန်: ဟီလ်တန် DL, Watts C. ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲမြား: A မှ neuroscience ရှုထောင့်။ တစ်ဟုန်ထိုး Neurol Int 21-ဖေဖော်ဝါရီ-2011; 2: 19 ။ : ကနေရရှိနိုင် http://surgicalneurologyint.com/surgicalint_articles/pornography-addiction-a-neuroscience-perspective/
ဒီဝေဖန်သုံးသပ်ချက်၏သိသာထင်ရှားသော postulate အားလုံးစှဲဦးနှောက်ထဲမှာဓာတုပြောင်းလဲမှုများနှောက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုစုပေါင်းတံဆိပ်ကပ် hypofrontal Syndrome ၏အမျိုးမျိုးသောသရုပ်မှုအရာခန္ဓာဗေဒနှင့်ရောဂါဗေဒအပြောင်းအလဲများအပြင်ဖန်တီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအ syndrome ခုနှစ်တွင်၎င်း၏အရိုးရှင်းဆုံးဖော်ပြချက်လျှော့ချအခြေခံချွတ်ယွင်း, ဦးနှောက်၏ "ဘရိတ်စနစ်က" ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သည်လည်းမြင်းသရိုက်ပုံ, လေဖြတ်ခြင်း, စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်မြင်နေကြသည်ဘို့သူတို့ကကောင်းကောင်း, လက်တွေ့အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အထူးသဖြင့်နှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူများနှင့် neurosurgeons သိနေကြသည်။ အမှန်စင်စစ်ခန္ဓာဗေဒဤတိုကျရိုကျထိန်းချုပ်မှုစနစ်များအရှုံးအချိန်ကျော်အမှတ်စဉ် MRI Scan ဖတ်များ၌တွေ့မြင်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏တိုးတက်သောကျုံ့ခြင်းဖြင့်ပုံအောအများစုသိသာအောက်ပါစိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်ပါတယ်။
hypofrontal Syndrome-Impulse, compulsive, စိတ်ခံစားမှု lability ၏သော့ဒြပ်စင်ဖြစ်သော်လည်း, ချို့ယွင်းတရားနေကြသည်ကိုကောင်းစွာဖော်ပြထားသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏တာမသိရသေးပေ။ ဤအ hypofrontal ပြည်နယ်များတစ်ခုမှာထွန်းသစ်ရှုထောင့်စွဲလမ်းလူနာအတွက်တွေ့ရှိချက်၎င်းတို့၏ဆင်တူသည်။ hypofrontality, မုဆိုး addressing et al။ မှတ်ချက်ချ "စွဲ၏လေ့လာမှုများ orbitofrontal cortex အတွက်ဆယ်လူလာလှုပ်ရှားမှုလျှော့ချ Show တစ်ဦးနှောက်ဧရိယာ ... [အပေါ်သို့မှီခို] ... မဟာဗျူဟာမြောက်ထက်ထကြွလွယ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်။ ဦးနှောက်ကိုခင်းကျင်းပြသပြဿနာများ-ကျူးကျော်အနာဂတ်အကျိုးဆက်များ၏ဆင်းရဲသားကိုတရားသဖြင့်စီရင်, ပစ္စည်းဥစ္စာချိုးဖောက်လေ့လာတွေ့ရှိသူတို့အားအလားတူဖြစ်ကြောင်းမသင့်လျော်တုံ့ပြန်မှုတားစီးနိုင်ခြင်း၏ဤဧရိယာမှစိတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့်အတူလူနာ။"[ 8 ] (အလေးပေးထည့်သွင်း) ။
2002 ခုနှစ်, ကိုကင်းစွဲအပေါ်တစ်ဦးလေ့လာမှုတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအပါအဝင်ဦးနှောက်အများအပြားဒေသများရှိတိုင်းတာအသံအတိုးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှု, သရုပ်ပြခဲ့သည်။ [9] အဆိုပါလေ့လာမှု technique ကိုဦးနှောက်၏ 1 မီလီမီတာ Cube quantified နှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အနေနဲ့ MRI-based protocol ကို, voxel-based morphometry (VBM), ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ် VBM လေ့လာမှုအလွန်ဆင်တူတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူစိတ်ကြွဆေးအပေါ် 2004 အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ [ 27 ဤအလုပ်သမျှကိုသုံး "စစ်မှန်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများ" ဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်] စိတ်ဝင်စားဖို့စဉ်တွင်ဤတွေ့ရှိချက်သည်သိပ္ပံပညာရှင်ဒါမှမဟုတ် layperson ဖြစ်စေရန်အံ့သြစရာဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကစွဲဦးနှောက်ထဲမှာတိုင်းတာ, ခန္ဓာဗေဒပြောင်းလဲမှုထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပို. ပင်မှတ်သားစရာများစွဲနှင့်အဝလွန်ခြင်းမှဦးဆောင်အစာစားခြင်း, ပုံမှန်ဇီဝအပြုအမူများ၏အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မြင်အလားတူတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ကြသည်။ 2006 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦး VBM လေ့လာမှုအဝလွန်ခြင်းမှာအထူးရှာဖွေနေထုတ်ဝေလျက်, ရလဒ်များကိုကင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးလေ့လာမှုများမှအလွန်ဆင်တူခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်။ [ 20 ] အဆိုပါအဝလွန်လေ့လာမှုအထူးသဖြင့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ဒေသများရှိ, အသံအတိုးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုအများအပြားဒေသများသရုပ်ပြခဲ့သည်။ တစ်ဦး exogenous မူးယစ်ဆေးစွဲဆန့်ကျင်အတိုင်းဤလေ့လာမှု, သဘာဝ endogenous စွဲမြင်နိုင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသရုပ်ပြအတွက်သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်၏သက်ရောက်မှုများအဝလွန်လူကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့အပြင်သူကအလိုလိုကိုလက်ခံရန်လွယ်ကူသည်။
အစာစားခြင်း, သင်တန်း, မျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှုအတွက်လိုအပ်သောတစ်ဦးချင်းစီရှင်သန်ရပ်တည်ရေး, ရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ မျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှုအတွက်လိုအပ်သောနောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှုလိင်, အဝလွန်ခြင်းအပေါ်အလုပ်ကနေဆင်းသက်လာယုတ္တိမေးခွန်းများကိုတစ်ဦးစီးရီးမှဦးဆောင်သည့်လေ့လာရေးပါပဲ။ စားစွဲတွင်တွေ့မြင်တွေ့ရှိချက်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်မြင်စေမလား? လိင်အတွက်အာရုံကြောသဘောစွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? သို့ဆိုလျှင်အခြားသောစှဲနှင့်မြင်ဦးနှောက်ထဲတွင်စွဲခန္ဓာဗေဒအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူရှိဆက်နွယ်နေကြသနည်းတစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု compulsive လိင်အမှန်ပင်စွဲလမ်းနိုင်ကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားထောက်ခံပါတယ်။ 2007 ခုနှစ်တွင်, ဂျာမနီထဲက VBM လေ့လာမှုအထူးသ pedophilia ကြည့်ရှုလျက်, ကင်း, စိတ်ကြွဆေးနှင့်အဝလွန်ခြင်းလေ့လာမှုများမှနီးပါးတူညီတွေ့ရှိချက်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ [ 25 ] ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှူဦးနှောက်ထဲမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ခန္ဓာဗေဒပြောင်းလဲမှု, ဦးနှောက်စွဲ၏အမာခံများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကပဏာမလေ့လာမှုအထူးသမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းလူနာတိုကျရိုကျကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပြတော်မူ၏။ [ 16 ] ဒီလေ့လာမှုအဖြူကိစ္စမှတဆင့်အာရုံကြောဂီယာ၏ function ကိုအကဲဖြတ်ဖို့ပျံ့နှံ့ MRI ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာသာလွန်တိုကျရိုကျဒေသ, compulsive နဲ့ဆက်စပ်ဧရိယာများတွင်မူမမှန်သရုပ်ပြခဲ့သည်။
တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ဟားဗတ်မှာဒေါက်တာ Howard Shaffer ငါစွဲတွေအများကြီးအတွေ့အကြုံ ... ထပ်တလဲလဲ, High-စိတ်လှုပ်ရှားမှု, High-အကြိမ်ရေအတှေ့အကွုံမြား၏ရလဒ်ကြောင်းအကြံပြုသည့်အခါငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူကြီးမြတ်အခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ် "ဟုရေးသားခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုသို့ neuroadaptation-, အပင်မူးယစ်ဆည်းပူးနေ၏မရှိခြင်းအတွက်အပြုအမူ-ဖြစ်ပေါ်ရှည်ကိုအာရုံကြော circuitry ပြောင်းလဲမှုများကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာမယ့်။ "[ 13 ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နည်းပညာပိုင်းနည်းနည်းရှေးခယျြမှုလည်းမရှိ, စွဲလမ်း၏နိုငျငံတျောအတှငျးရှိပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ် process ကိုစှဲပါဝင်သည်သင့်ပါတယ်ရှိမရှိငြင်းခုံဖို့ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်း] နောက်ထပ်မကြာသေးမီကသူ "ဟုရေးသားခဲ့သည်။ exogenous တ္ထုများအသုံးပြုခြင်းကဦးနှောက်အတွင်းအဲဒီ receptor sites များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်အယောင်ဆောင်မော်လီကျူး precipitate သကဲ့သို့, လူ့လှုပ်ရှားမှုများသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ် neurotransmitters လှုံ့ဆော်ခြင်း။ ဤအသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ် psychoactive တ္ထုများ၏လှုပ်ရှားမှုဖွယ်ရှိအများအပြားဖြစ်စဉ်ကိုစှဲ၏အရေးကြီးသောပြုပြီအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။ "[ 24 ]
2005 ခုနှစ်တွင်ဒေါက်တာအဲရစ် Nestler ဦးနှောက်၏ mesolimbic ဆုလာဘ်စင်တာများတစ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်အားလုံးစွဲဖော်ပြတစ်မှတ်တိုင်စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။ အပျော်အပါး / ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းထိုကဲ့သို့သောကင်းသို့မဟုတ် opioids အဖြစ် exogenous မူးယစ်ဆေးဝါးများအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်လိင်အဖြစ်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနှင့်မွေးရာပါသဘာဝအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်များအားဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲသည့်အခါစွဲတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အလားတူ dopaminergic စနစ်များနျူကလိယ accumbens နှင့်အခြား striatal salience စင်တာများမှ၎င်း၏စီမံချက်များနှင့်အတူ ventral tegmental ဧရိယာများပါဝင်သည်။ သူကအထောက်အထား VTA-NAc လမ်းကြောင်းနှင့်အခြား limbic ဒေသများအလားတူထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, လိင်နှင့်လူမှုရေး interaction ကသဘာဝဆုလာဘ်၏စူးရှသောအပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ခံစားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်ဖျန်ဖြေအထက်တွင်ကိုးကားကွောငျးဖျောပွသညျထှနျး "ဟုရေးသားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအတူတူပင်ဒေသများတွင်လည်းထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒကျော်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲအဖြစ် (ထိုသဘာဝဆုလာဘ်များအတွက် compulsive စားသုံးမှုဖြစ်ပါသည်) ဒါခေါ် '' သဘာဝအစှဲ '၌ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ ပဏာမတွေ့ရှိချက် shared လမ်းကြောင်းပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအကြံပြု: ။ (ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်) အလွဲသုံးစားမှုဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြားဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive "[ 18 ]
ဖြစ်စဉ်ကို (သို့မဟုတ်သဘာဝက) စှဲဖို့ဒီအာရုံကိုပု mesolimbic salience လမ်းကြောင်းအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ သကဲ့သို့ exogenously အုပ်ချုပ်မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine receptors ၏အဆင့်လျှော့ချခဲ့စေသက်သေအထောက်အထားအလားတူရောဂါဗေဒဖြစ်စေတဲ့ endogenously functioning neurotransmitters ထောက်ခံပါတယ်။
အဆိုပါ 1660s ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလန်ဒန်၏ဂုဏ်သတင်း Royal Society, ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး running သိပ္ပံနည်းကျဂျာနယ်ထုတ်ဝေ။ ၏လတ်တလောပြဿနာအတွက် Royal Society ၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်ထိုသို့ Society ရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာကမ္ဘာ့ဦးဆောင်စွဲသိပ္ပံပညာရှင်များအချို့တို့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်, စွဲလမ်း၏နားလည်မှု၏လက်ရှိအခြေအနေကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးသတင်းပို့ဂျာနယ်တွင်ပြဿနာများ၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်စိတ်ဝင်စားစရာ, အ 17 ဆောင်းပါးနှစ်ခုကသဘာဝစွဲအဘို့သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူအထူးစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသည် "စွဲ-သစ်ကို Vista ၏ neurobiology ။ ": ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း [ 23 ] နှင့်ကျော်။ [ 28 ] တစ်ဦးကတတိယစက္ကူ, DeltaFosB နှင့်ဆက်စပ်သောမူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာစွဲ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ, addressing ။ [ 19 ] DeltaFosB Over-ထုတ်ဖော်ပြောဆိုစွဲဘာသာရပ်များ၏အာရုံခံအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာ Nestler နေဖြင့်လေ့လာခဲ့တဲ့ပရိုတိန်းသည်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံး [မူးယစ်ဆေးစွဲလေ့လာတိရိစ္ဆာန်များ၏အာရုံခံ၌တွေ့ 17 ] ယခုမူကား Over-စားသုံးမှုကသဘာဝဆုလာဘ်၏ဆက်စပ် accumbens သည့်နျူကလိယမှာတွေ့ရှိထားသည်။ [ 18 ] DeltaFosB နှင့် Over-စားသုံးမှုနှစ်ခုကသဘာဝဆုလာဘ်များအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ, အစာစားခြင်းနှင့်လိင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမကြာသေးမီကစက္ကူ, ကောက်ချက်ချ: ... ဒီနေရာမှာတင်ပြအလုပ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအပြင်, သဘာဝဆုလာဘ်ဟာ Nac အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်သွေးဆောင်သောသက်သေအထောက်အထားများကိုထောက်ပံ့ပေး ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်များ NAc အတွက်ΔFosBသော induction key ကိုမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ရှုထောင့်, ဒါပေမယ့်လည်းသဘာဝကဆုလာဘ်များ compulsive စားသုံးမှုပတျသကျလို့ခေါ်သည့်သဘာဝစှဲ၏ရှုထောင့်ကိုသာဖျန်ဖြေခြင်းအလိုငှါဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။ [ 29 ]
ပို. ပင်ဆိုင်တဲ့ neuroplasticity အပေါ်လိင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖော်ပြ 2010 ထုတ်ဝေမကြာသေးမီကစာတမ်းများဖြစ်ကြသည်။ တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနျူကလိယအတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံမြားတှငျပွောငျးလဲသွေးဆောင်ပြထားပြီးအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူမြင်ကြသူတို့အားအလားတူ accumbens ။ [ 21 ] နောက်ထပ်လေ့လာမှုလိင်အထူးနျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB တိုးပွါးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့နှင့်သဘာဆုလာဘ်မှတ်ဉာဏ်အတွက်အာမခံအဖြစ်အခန်းကဏ္ဍဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုကလည်း DeltaFosB ၏ overexpression တစ် hypersexual syndrome ရောဂါသွေးဆောင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ [ 22 ] ဒေါက်တာ Nestler DeltaFosB အရှင်တစ်ခုစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းနှင့်၎င်း၏တဖြည်းဖြည်းနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီ '' စွဲ '' သောမှတစ်ဦးချင်းရဲ့ဆုလာဘ် circuitry ၏ activation ၏ပြည်နယ်အကဲဖြတ်ရန်a"ကို biomarker အဖြစ်ဒီဂရီဖြစ်လာစေခြင်းငှါ, ပြောခဲ့သကဲ့သို့ တိုးချဲ့ဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်ကုသမှုစဉ်အတွင်းဆုတ်။ "[ 22 ]
ဒေါက်တာနိုရာ Volkow, အမျိုးသား Institute ၏ဦးခေါင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (NIDA) ရက်နေ့တွင်နှင့်စွဲလမ်း၏လယ်ပြင်တွင်အများဆုံးထုတ်ဝေခြင်းနှင့်လေးစားဖွယ်သိပ္ပံပညာရှင်တဦးတည်းကသဘာဝစွဲ၏နားလည်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်ဖြစ်ပါသည်, ၏နာမတော်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဆော်သြ ဂျာနယ်ထဲမှာကိုးကားအဖြစ်စွဲလမ်းမှု၏ရောဂါများအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုမှနျ NIDA, သိပ္ပံ: "NIDA ဒါရိုက်တာ Nora Volkow လည်းသူမ၏အဖွဲ့အစည်းရဲ့နာမညျကိုပတ်ဝိုင်းသင့်ကြောင်းခံစားခဲ့ရ ထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းအဖြစ်စှဲ, လောင်းကစားများနှင့်အစားအစာ, NIDA အကြံပေး Glen Hanson ကပြောပါတယ်။ '' သူမသည် [ကျနော်တို့သငျ့သညျ] တပြင်လုံးကိုလယ်ပြင်ကိုကြည့်သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးပို့ဖို့လိုပါတယ်။ '' "[7] (အလေးပေးထည့်သွင်း) ။
အဆိုပါ limbic salience စင်တာများအတွက်တိုင်းတာ, သက်သေပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်အဖြစ် overeating အနေနဲ့အမှန်တကယ်စွဲဖြစ်နိုငျသောတိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားနှင့်အတူဤပြဿနာကိုကြှနျတျောတို့၏အာရုံကိုသင့်လျော်စွာတိုးပွားလာနေသည်။ သို့သျောလညျးလိင်၎င်း၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆက်ဆံမှုနှင့်အတူ, သိပ္ပံနည်းကျစကားစစ်ထိုးပွဲအတွက်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျအများကြီးလျော့နည်းကိုင်တွယ်နေပါတယ်။ ဤသည်အထီးလိင်တူဆက်ဆံဘို့သက်တမ်းတစ် 1997 နှစ်ကျဆင်းခြင်းသရုပ်ပြထားတဲ့ 20 အတွက်ထုတ်ဝေသော Hogg လေ့လာမှု၏နောက်ဆက်တွဲအတွက်သိသာခဲ့သည်။ [ 12 ] ပုံလူမှုရေးဖိအားခံစားအဆိုပါစာရေးဆရာ, သူတို့ကိုခေါ်ဘယ်အရာကိုတံဆိပ်ကပ်ခံရရှောင်ရှားရန်တစ်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် "homophobic ။ " [ 11 ] တစ်ဦးသိပ္ပံဂျာနယ်အမြိုးမြိုး၏ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုတောင်းပန်ထုတ်ဝေရန်မယ်လို့အဲဒီမှာလည်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းအဖြစ်ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းအလေးအနက်ဆွေးနွေးမှုများစတင်အချိန်ဖြစ်ပါသည်ရှေ့ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အတူသို့သော်ယုံကြည်ပါတယ်။
5 ၏မေလတွင်ထုတ်ဝေဖို့စီစဉ်ထားအဆိုပြုထား DSM-2014, ဤအသစ်ကအပြင်ပြဿနာ, compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပါဝင်သော Hypersexual Disorder ၏ရောဂါပါဝင်သည်။ [ 1 ] naltrexone နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲကုသအပေါ် Mayo Clinic ဆေးခန်းထဲကသူတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာအတွက် Bostwick နှင့် Bucci, "ရေးသားခဲ့သည် ... အ (ညစ်ညမ်း) စှဲလမျးသူရဲ့ PFC အတွက်ဆယ်လူလာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်မူးယစ်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများတိုးမြှင့် salience မှု, Non-မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆော်မှု၏ salience လျော့နည်းသွား နှင့်ရှင်သန်မှုမှဗဟိုရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလှုပ်ရှားမှုများလိုက်စားစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းသွားသည်။ "[3]
2006 ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အညစ်ညမ်းဝင်ငွေသည် Microsoft, Google Amazon, eBay, Yahoo က Apple နှင့် Netflix နဲ့ပေါင်းစပ်ထက်ပို, 97 ဒေါ်လာဘီလျံခဲ့သည်။ [ 14 ] ဒီမျှပေါ့ပေါ့, inconsequential ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါသည်, သေးညစ်ညမ်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေလူမှုရေးနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု trivialize တဲ့သဘောထားကိုရှိသေး၏။ အဆိုပါလိင်စက်မှုလုပ်ငန်းအောင်မြင်စွာဘာသာရေး / ကိုယ်ကျင့်တရားရှုထောင့်ကနေဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ညစ်ညမ်းမှမဆိုကန့်ကွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာပြီ သူတို့ပြီးတော့ပထမဦးစွာပြင်ဆင်ရေးချိုးဖောက်တဲ့အတိုင်းဒီကန့်ကွက်ပယ်ချ။ ညစ်ညမ်းစွဲဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျရှုမြင်ကြသည်လျှင်သက်သေအထောက်အထားများကအမှန်ပင်-Bond တွဲနှင့် ပတ်သက်. လူသားများတွင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေမဖော်ပြသည်။ [2] ကလေးညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သားသမီးများနှင့်အတူအမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွင်ပါဝင်အကြားဆက်စပ်မှု (85%) Bourke နှင့်ဟာနန်ဒက်ဇ်တို့ကသရုပ်ပြခဲ့သည်။ [4] ဒီခေါင်းစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးမှုအတွက်အခက်အခဲနောက်တဖန်လူမှုရေးခိုင်ခိုင်လုံလုံပေါ်မှာဤအချက်အလက်များ၏ကြိုးပမ်းဖိနှိပ်မှုများကသရုပ်ဖော်ထားသည်။ [ 15 ] Hald ကမကြာသေးမီ Meta-analysis သည် et al။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုသဘောထားတွေ inducing ညစ်ညမ်းနှင့် ပတ်သက်. ဆက်စပ်မှုသရုပ်ပြယခင်ဒေတာကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ရှငျး။ [ 10 ] ထိုကဲ့သို့သောခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုဒေတာနှင့်အတူဤပတ်သတ်ပြီး causation ၏ဖွယ်ရှိဖြစ်နိုင်ခြေဖြေရှင်းဖို့မတာဝန်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအသုံးပြုမှုပုံစံများဆက်စပ်၌ဤဒေတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်အထူးသဖြင့်ကိုရည်မှတ်လျက်ရှိ၏ ကောလိပ်ကျောင်းအသက်အရွယ်ယောက်ျား၏ 87% အမျိုးသမီးများ၏ 50% အဖြစ်ကောင်းစွာကြည့်ရှုအတူနေ့စဉ်သို့မဟုတ်တိုင်းကတခြားနေ့က 20% အပတ်စဉ်နှင့် 31, ညစ်ညမ်းရှုမြင်ကြသည်။ [5] ဆယ်ကျော်သက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ညစ်ညမ်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ [6]
ဆက်ဆက်ဆရာများကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့အခန်းကဏ္ဍကျွန်တော်တို့ဟာအထူးသဖြင့်အားလုံးစွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များများ၏အာရုံကြောအခြေခံ supporting အထောက်အထားကြီးထွားလာအလေးချိန်ပေးထားသော, ဤလုပ်ငန်းစဉ်သစ်တွေ entity သို့မဟုတ်သဘာဝအစွဲနှင့်ဆက်စပ်သောလူ့ရောဂါဗေဒစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်ဆက်ဆံဖို့ပိုလုပျဆောငျနိုငျအကြံပြုထားသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးဇီဝအခြေခံရှိခြင်းအဖြစ်အစားအသောက်စွဲလမ်းကိုစဉ်းစားသကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမကငျြ့ဝတျပြသမှုသို့မဟုတ်တန်ဖိုးဝန်ကိုထမ်းရွက်ဝေါဟာရများနှင့်အတူကြောင့်ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အတူတူပင်ရည်မှန်းချက်မျက်စိနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏အခြားပုံစံများကိုကြည့်ရှုအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင်လူမှုရေးဖိအားများကိုလူထုအခြေပြုတွင်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးနေရာများအတွက်အဓိကအားဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုမှညစ်ညမ်း၏စီမံခန့်ခွဲမှု relegate ။ [ 26 ] ဒီဝေဖန်သူတွေကိုအလေ့အကျင့်များမကြာမီဘယ်အချိန်မဆိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အသနားခံမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်ဆေးပညာအားဖြင့်တစ်ဦးစာမေးပွဲနှင့်အထူးညစ်ညမ်း၏ရောဂါဗေဒ၏စွဲလမ်းသဘာဝတရား၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဆေးကုသမှုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍများ၏လက်တွေ့မှ neuroscience အထူးအားပေးဖို့ရှာကြံတဲ့ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွေးကနိဂုံးချုပ်မှာတော့ညစ်ညမ်းတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပရိုဖိုင်းကိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်း၏ဇာတိအားဖြင့်မဆိုဤကဲ့သို့သောပရိုဖိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည့်အတွက်စွဲလမ်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏အသိပညာ၏လက်ရှိအနေအထားကို၏အတန်ငယ်စရိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ စားပွဲတင် 1 ဆေးပညာအားဖြင့်ဝမ်းရောဂါ၏ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဂယက်၏နားလည်မှုဖြစ်ကောင်းညစ်ညမ်း၏အဖြစ်စရိုက်အခါ, တစ်ဦးမော်ဒယ်လ်အဖြစ် 1854 အတွက်လန်ဒန်မြို့တွင်ဝမ်းရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပွား၏စုံစမ်းစစ်ဆေးသုံးပြီးညစ်ညမ်း၏ဖြစ်ရပ်၏ထိုကဲ့သို့သောပရိုဖိုင်းကိုပေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ယနေ့။ nonmedical အရင်းအမြစ်များကိုတဆင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းညစ်ညမ်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏စက်မှုလုပ်ငန်းအားဖြင့်ကြီးမားအလှူငွေသတိပြုနေစဉ်, ဒါကြောင့်လည်းစွဲ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဆေးဝါးအဘို့အရာအရပျအကြံပြုထားသည်။
1 ။ .editors ။ American Psychiatric Association, DSM-5 ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ စ။
2 ။ Bergner RM, Bridges AJ ။ သုတေသနနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု: ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များအတွက်မိုးသည်းထန်စွာညစ်ညမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အရေးပါမှုကို။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2002 ။ 28: 193-206
3 ။ Bostwick JM, Bucci ဂျေအေ။ naltrexone နဲ့ကုသအင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်း။ Mayo အဘိဓါန် Clin proc ။ 2008 ။ 83: 226-30
4 ။ Bourke M က, ဟာနန်ဒက်ဇ်အေအဆိုပါ '' Butner လေ့လာမှု '' redux: ကလေးညစ်ညမ်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားဖြင့်လက်ပေါ်မှာကလေးကသားကောင်များ၏ဖြစ်ပွားမှု၏အစီရင်ခံစာ။ J ကို Fam အကြမ်းဖက်မှု။ 2009 ။ 24: 183-91
5 ။ ကာရိုး J ကို, Padilla-Walker က LM, နယ်လ်ဆင် LJ ။ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကို XXX: ထွန်းသစ်စလူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလက်ခံမှုနှင့်အသုံးပြုခြင်း။ J ကို Adoles Res ။ 2008 ။ 23: 6-30
6 ။ Collins RL, Elliott သည် MN, Berry ဟာ SH, Kanouse DE, Kunkel: D, Hunter SB ။ ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင်အကဲခတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစတင်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကလေးအထူးကု။ 2004 ။ 114: 280-9
7 ။ ။ အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ ကျပန်းနမူနာယခုတရားဝင်ရောဂါ ?. သိပ္ပံ။ 2007 ။ 317: 23-
8 ။ မုဆိုး JL, Volkow ND, Kassed CA. အဆိုပါစွဲလူ့ဦးနှောက် Imaging ။ သိပ္ပံ Pract ရှုထောင့်။ 2007 ။ 3: 4-16
9 ။ Franklin TR, Acton PD, Maldjian ဂျာ Grey က JD, Croft JR, Dackis CA. မီးခိုးရောင်ကိစ္စဟာနောက်ကျနေခဲ့သည်, orbitofrontal အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှု, cingulate နှင့်ကိုကင်းလူနာယာယီ cortical လျော့နည်းသွားသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002 ။ 51: 134-42
10 ။ Hald GM က, Malamuth မိုင်, Yuen C. ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုထောက်ပံ့သဘောထားတွေ: nonexperimental လေ့လာမှုများအတွက်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်။ ကျူးကျော်ပြုမူနေ။ 2010 ။ 36: 14-20
11 ။ Hogg RS, Strathdee လုပ် SA, Craib KJ, O'Shaughnessy သင်္ဘော MV, Montaner J ကို, Schechter MT ။ လိင်တူချစ်သူသက်တမ်း revisited ။ int J ကို Epidemiol ။ 2001 ။ 30: 1499-
12 ။ Hogg RS, Strathdee လုပ် SA, Craib KJ, O'Shaughnessy သင်္ဘော MV, Montaner JS, Schechter MT ။ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများတွင်သေဆုံးမှုအပေါ် HIV ပိုးရောဂါ၏သက်ရောက်မှုမော်ဒယ်။ int J ကို Epidemiol ။ 1997 ။ 26: 657-61
13 ။ Holden C. အပြုအမူစှဲ: သူတို့တည်ရှိနေပါနဲ့ ?. သိပ္ပံ။ 2001 ။ 294: 980-
14 ။ .editorsp ။
15 ။ .editorsp ။
16 ။ မိုင်းလုပ်သား MH, Raymond N ကို, Mueller BA, လွိုက် M က, Lim က KO ။ complusive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ implusive နှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2009 ။ 174: 146-51
17 ။ Nestler EJ, Kelz ကို MB, Chen ကဂျေ DeltaFosB: ရေရှည်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့် plasticity ၏မော်လီကျူးဖျန်ဖြေ။ 1999; 835: 10-7 ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999 ။ 835: 10-7
18 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား ?. သဘာဝတရား neuroscience ။ 2005 ။ 9: 1445-9
19 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းက္ပ။ ဖီးလ်ဖြတ်ကျော်ရွိုင်း Soc ။ 2008 ။ 363: 3245-56
20 ။ Pannacciulli N ကို, Del Parigi တစ်ဦးက, ချန် K ကိုက Le DS, Reiman EM, Tataranni PA ဆိုပြီး။ ဦးနှောက်ဟာလူ့အဝလွန်ခြင်းအတွက် abnormalities: တစ်ဦးက voxel-based morphometrystudy ။ Neuroimage ။ 2006 ။ 311: 1419-25
21 ။ အိုး KK, Balfour ME, Lehman MN, Richtand မိုင်, ယု L ကို, Coolen LM ။ သဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ် abstinence အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ mesolimbic စနစ် Neuro-plasticity ။ Biol Psy ။ 2010 ။ 67: 872-9
22 ။ အိုး KK, Frohmader KS, Vialou V ကို, Mouzon အီး, Nestler EJ, Lehman MN ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် DeltaFosB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်ဘို့အရေးကြီးသည်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2010 ။ 9: 831-40
23 ။ Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း၏ neurobiology: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အသစ်တွေ့ရှိချက်များ။ ဖီးလ်ဖြတ်ကျော်ရွိုင်း Soc ။ 2008 ။ 363: 381-90
24 ။ Schaffer HJ.editors ။ စွဲလမ်းမှုကဘာလဲ? တစ်ဦးကအမြင်။ စွဲလမ်းမှုအပေါ်ဟားဗတ်ဌာနခွဲ၏။ စ။
25 ။ Schiffer B, Peschel T က, ပေါလုသည် T, Gizewski အီး, Forsting M က, pedophilia အတွက် frontostriatal စနစ်နှင့် cerebellum အတွက် Leygraf N. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကဦးနှောက်မူမမှန်။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2007 ။ 41: 754-62
26 ။ ဒေနောရိ A.editors ။ ရှေ့နေရဲ့ Desk စာအုပ်။ နယူးယောက်: Wolters Kluwwer; 2007 ။ စ။ 28.50-28.52
27 ။ Thompson ကလေး, Hayashi KM ရှိမုန် SL, Geaga ဂျာဟောင်ကောင်က MS, Sui ကို Y. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံစိတ်ကြွဆေးကိုအသုံးပြုဖို့သူအလူ့ဘာသာရပ်များ၏ဦးနှောက်အတွက်မူမမှန်။ J ကို neuroscience ။ 2004 ။ 24: 6028-36
28 ။ Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, စွဲလမ်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်အာရုံခံဆားကစ်ထပ် Telang အက်ဖ်: စနစ်များကိုရောဂါဗေဒ၏သာဓက။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008 ။ 363: 3191-200
29 ။ Wallace DL, Vialou V ကို, Rios L ကို, Carl-Florence TL, Chakravarty S က, Kumar ကအေမှာသဘာဝဆုလာဘ်-related အပြုအမူအပေါ်နျူကလိယ accumbens အတွက် deltaFosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ J ကို neuroscience ။ 2008 ။ 28: 10272-7
- နောက်ထပ်ကြည့်ရှုရန် -